Somaliland.Org » Ma Cadda Qorshaha Diiwaan Gelinta Komishanka S/Lanad
OPINIONMa Cadda Qorshaha Diiwaan Gelinta Komishanka S/Lanad
February 27th, 2008 Comments Off Qorshaha Diiwaan Galinta Komishanka Doorashooyinka Qaranku Wuu Khilaafsan Yahay Xeerka Diiwaan Galinta Xeer Lr.37/2007
Qorshaha diiwaan gelinta codbixiyeyaasha ee Komishanka Doorashooyinka Qaranku (KDQ) ay doonayaan inay ku dhaqan galiyaan diiwaan gelinta codbixiyeyaashu wuxuu si cad u khilaafsan yahay xeerka diiwaan galinta codbixiyeyaasha ee xeer Lr.37/2007. xeerkan oo lagu maamulayo diiwaan galinta codbixiyeyaaha qaranka Somaliland sida uu dhigayo qodobkiisa 2-aad ee xeerkan ayaa jidaynaya waxa uu noqonayo diiwaanku; qaab dhismeedka maamulka goobaha diiwaan galinta codbixiyeyaasha.
Wakhtiga la dhaqan galinayo diiwaan galinta iyo wakhtia kama dambaysta ah ee ay tahay inay shaqaalaha diiwaan galintu joogaan ama la geeyo goobaha dadka lagu diiwaan galinayo.
Wakhtiga ay soconayso diiwaan galintu, sida loo xafidayo agabka diiwaan galinta, siday warbixinaha u kala helayaan goobta diiwaan galinta, degmada, gobolka iyo xarunta dhexe.
Markay dhamaato mudada diiwaan galintu qofka ka taga jiidii uu iska diiwaan galiyay ee meel kale taga ee jecel inuu halkaa kale ka codeeyo xiliga doorashada waxa uu yeelayo iyo hadii habsan ku yimaado waxa dhaca, xilalka iyo waajibaadka ay kala leeyihiin masuuliyiinta diiwaan galinta ee goob, degmo, gobol iyo qaran, iyo qofka ay goobta ku xaqiijin kari waayaan muwaadinimadiisa wakiilada wasaarada arrimaha gudaha iyo maxkamada racfaanku. Fursada ay tahay in la siiyo, iyo guud ahaanba soo saarista liisaska.
Arrimaha dhamaantood, barnaamijka diiwaan galinta codbixiyeyaasha ee KDQ soo bandhigeen wuxuu u dhigayaa qaab ka gedisan sida uu xeerku jeedinayo.
Waxa arrintaa tusaale ugu filan arrimahan:
1- Wakhtigan la dhaqan galinayo diiwaan galinta, wuxuu dhigayaa Qod: 12-aad, faqradiisa koowaad sidan:-
“Komishanku waa inuu ku dhaqan galiyo diiwaan galinta codbixiyeyaasha ugu yaraan muddo lix bilood ah ka hor maalinta doorashada.
Wakhtigan hada la joogo ee ay soo bandhigeen barnaamijkii ay ku dhaqan galinayeen diiwaan galinta codbixyeyaasha waxa ka hadlay taariikhda loo ciyimay qabashada doorashada goleyaasha deegaanka muddo ku siman afar bilood oo keliya, wakhtigii sharci ahaana waxa la soo dhaafay laba bilood, mana jiro sharci u fasaxaya inay bilaabi karaan markay afar bilood ka hadhsan tahay maalinta doorashada”.
Qodobka 27, faqradiisa 1-aad, waxay dhigaysaa sidan:-
“Shan bilood ka hor maalinta doorashada waa in la gaadhsiiyo masuuliyiinta diiwaan galinta goobaha diiwaan galineed, lana bilaabo diiwaan galinta”
Mudadaa sharcigu tilmaamayana waxa la soo dhaafay hal bil welina lama shaqaalayn hawl wadeenadii ka haw geli lahaa goobaha diiwaan galinta”.
2- Qaab Dhismeedka Maam